Kaoperativa mpitatitra: “Tsy maintsy mandoa vola amin’ny hafa izahay” | NewsMada
Kaoperativa mpitatitra: “Tsy maintsy mandoa vola amin’ny hafa izahay”
Tsy fantatra mazava ny isan’ny kaoperativa mpitatitra an-tanety manerana ny Nosy. Na amin’ny lalam-pienena maro aza, betsaka ireo fiara mpitatitra tsy ao anatin’ny ara-dalàna sy jeren’ny mpitandro filaminana fotsiny. Tafiditra ao anatin’ny fifaninanana tsy araka ny tokony ho izy izany, raha ny fitarainana efa navoakan’ireo kaoperativa sasany.
Tsy manana saram-piantohana, tsy vita fizahana teknika, mitondra mpandeha tafahoatra, manao saran-dalana araka izay tiany… Izany rehetra izany, fantatry ny mpitandro filaminana amin’ireo lalam-pirenena maro, nefa jerem-potsiny, indrindra any amin’ny lalana mampifandray kaominina. Valinteny naroson’ireo mpitatitra ny faharatsian-dalana manahirana azy ireo, eo koa ny vola “tsy maintsy” omena ny mpitandro filaminana.
Raha samy handoa vola amin’ny sampana samy hafa ihany, nefa mitambatra ho iray ho an’ny mpitandro filaminana, aleon’ireo mpitatitra sasany ireo tsy manefa saram-piantohana, tsy manao fizahana teknika, tsy mijery ny lafiny teknika rehetra ary mitondra izay zaka. Tsy vitsy ny mpitatitra efa namoaka izany hevitra izany. Matiantoka voalohany ireo mpitatitra manara-dalàna, nefa “tsy maintsy” mbola mandoa vola amin’ny hafa ihany.
Betsaka ny fandaniana ataon’ireo mpitatitra manara-dalàna ireo, manomboka eny amin‘ny toby fiantsonana : hofan’ny toeram-piantsonana, volan’ny mpanera, mpamatotra entana sy izay mety mbola fandaniana hafa. Aiza ny minisiteran’ny Fitaterana amin’izany rehetra izany na eo aza ny fivondronan’ireo kaoperativa mitaky ny handaminan-draharaha ?